Ndezvipi zvinhu zvinofanirwa kutariswa pakusarudza zvinhu zvemidziyo yekunze?
ne admin pane 20-12-21
Zhizha riri kuuya, uye fenicha yekunze ichakurumidza kushandiswa. Unogona kufunga kuti fenicha yekunze inofanirwa kunge iine hunhu hwakafanana nemidziyo yemumba yakaita sematafura, macheya nemasofa, sekugara, kunyaradza uye chimiro (uyezve, mutengo). Izvi zvinodiwa. Asi iwo musiyano mukuru ...
Midziyo inogona zvakare kuve hunyanzvi
Imwe fenicha pachayo ine zvinhu zvakavezwa, kunyanya izvo zvemuti, simbi, ceramic kana resin, iyo inogona kuiswa muchikamu chimwe kunze kwezvigaro zvinoshanda. Kana zvichikwanisika, kumbira muartist kuti atarise iko kunoiswa gadheni rako nemidziyo, kana kumupa iye akawanda ...
Ndezvipi zvinodiwa zvemidziyo yekunze?
Kuti uite fenicha yekunze zvirinani kuchinjira kune yekunze nharaunda uye kuita kuti vanhu vave nezororo uye mabasa akasununguka munzvimbo yekunze, fenicha yekunze inowanzo kuve nezvinodiwa zvinotevera: 1. Hupenyu hwehupenyu hwakareba, hwakasimba Kuenzaniswa nemidziyo yekunze, inonyanya kuzivikanwa .. .